Ukwethulwa kwenqubo ye-MBR yokuphathwa kwendle ubuchwepheshe-Imboni izindaba-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Ukwethulwa kwenqubo ye-MBR yobuchwepheshe bokwelashwa kwendle
Isikhathi: 2020-04-13 Hits: 59
I-Membrane bioreactor inqubo entsha yokwelashwa kwemfucumfucu enamanzi eyakhiwe ngokuhlukaniswa kwe-membrane kanye ne-biological yokwelapha technology. Kunezinhlobo eziningi zolwelwesi, ezihlukaniswe ngokwendlela yokuhlukanisa, kufaka phakathi ama-membranes okuphendula, ama-membrane we-ion wokushintshanisa, nezilungu ezivumayo; ngokohlobo lwama-membranes, kukhona ama-membranes wemvelo (ulwelwesi lwezinto eziphilayo) kanye nama-membranes okwenziwa (ama-membranes e-organic membranes angama -organic); Izinhlobo zokwakheka zihlukaniswa zibe luhlobo oluyicaba, uhlobo lwethhubhu, uhlobo lwasemoyeni kanye nohlobo oluyindilinga le-fiber.
1. Isimo sokucwaninga senqubo ye-MBR eChina
1. Hlola inhlanganisela yezinqubo zokwelapha zemvelo ezahlukahlukene kanye neyunithi yokuhlukanisa ulwelwesi. Inqubo yokwelapha yokusabela yokusabela ifinyelela kusuka ku-activated sludge indlela yokuxhumana ne-oxidation indlela, inqubo ye-biofilm, inqubo eyinhlanganisela ehlanganisa i-sludge evulekile ne-biofilm, kanye nenqubo yesigaba se-phobia O-phase phase
2. Cwaninga ngezinto, imodemu kanye nemodeli yezibalo ethinta umphumela wokwelashwa kanye nokufiphala kwe-membrane, hlola izimo zokusebenza ezifanele nezinqubo zokwenza inqubo, unciphise ukufiphala kwe-membrane ngangokunokwenzeka, futhi uthuthukise umthamo wokulungisa nokusebenza kokuqina kwamamojula we-membrane;
3. Nwebisa umkhawulo wohlelo lwe-MBR, into yocwaningo ye-MBR iyanda ukusuka ekukhuculweni kwendle okuphuma emanzini kuya kumanzi angamanzi agcwele imfucumfucu (amanzi amdaka wokudla, amanzi amdaka obhiya) kanye namanzi amdaka wezimboni angonakalisi (amanzi amdaka ophethiloli, ukuphrinta nokudaya amanzi angcolile, njll.), Kepha Ukwelashwa okuyinhloko kungamanzi adoti asekhaya.
2. Izici zenqubo ye-MBR
1. Ukwahlukanisa okuqinile okungamanzi okuqinile, umphumela wokuhlukanisa ungcono kunethangi lokudalwa kwendabuko, ikhwalithi yamanzi esebenza kahle ilungile, amamoza amisiwe nokungcoliswa asondele ku-zero, angaphinde asetshenziswe ngokuqondile, futhi aqaphele ukuvuselelwa kwendle.
3. Ngoba i-MBR ihlanganisa ithangi lendabuko lokuthathwa kwendle kanye nethambo lokudonswa kwendle kokuya endaweni eyodwa, futhi lithathe indawo yazo zonke izinto zobuchwepheshe zokwelashwa okuphezulu, linganciphisa kakhulu indawo ephansi futhi longe ukutshalwa kwezimali kobunjiniyela.
4. Ivumeleka ekuhlukaniseni nasekukhiqizweni kabusha kwamagciwane ane-nitrifying, uhlelo lunokusebenza kahle kwe-nitrization. Kungaba nemisebenzi yokwenza deamination and dephosphorization ngokushintsha imodi yokusebenza.
5. Njengoba isikhathi sodaka singaba isikhathi eside kakhulu, ukusebenza kahle kokuwohloka kwezinto eziphilayo okuvuselelayo kwenziwa ngcono kakhulu.
6. I-reactor isebenza ngaphansi komthamo omkhulu wevolumu, umthwalo omncane we-sludge, nobude besikhathi se-sludge. Umphumela osele we-sludge uphansi kakhulu. Njengoba iminyaka ye-sludge ingaba yinde isikhathi eside, emcabangweni, ukuqhuma kwe-zero sludge kungatholakala.
7. Uhlelo luqaphela ukulawulwa kwe-PLC, ukusebenza okulula nokuphatha.
3. Ukwakheka kwenqubo ye-MBR
I-membrane-bioreactor eshiwo kaningi empeleni yigama elijwayelekile lezinhlobo ezintathu zokuphendula:
1. I-Aeration membrane-bioreactor (Aeration Membrane Bioreactor, AMBR);
2. I-Extraction membrane-bioreactor (Extractive Membrane Bioreactor, EMBR);
3. I-membrane-bioreactor eyi-Solid-liquid ukwahlukanisa i-membrane-bioreactor (i-Solid / Liquid Sepgment MembraneBioreactor, SLSMBR, ebizwa nge-MBR).
Okwedlule: Inkambo yokuthuthuka kanye nomkhuba wesikhathi esizayo we-membrane technology ekusetshenzisweni kabusha kwemithombo yamanzi
Okulandelayo: Uyini umgomo wokusebenza kwemishini yokuhlanza indle ehlangene